Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Manokatra ny varavarany ny New Blossom Hotel Houston
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Blossom Hotel Houston, trano mihaja vaovao ao Houston, dia faly misokatra malalaka anio ho an'ny vahiny sy ny vahoaka. Ao amin'ny 7118 Bertner Avenue sy ny kianjan'ny NRG mpifanolo-bodirindrina, The Texas Medical Center ary toeram-pialam-boly malaza, ny hotely ankehitriny dia miandrandra ny fampahafantarana ny vondrom-piarahamonina Houston sy ny besinimaro amin'ny kojakoja eran-tany, ny fisakafoanana tsara ary ny toerana fivoriana sy hetsika avo lenta.
Ny hotely tsara indrindra any Houston dia misokatra miaraka amin'ny kojakoja tsara tarehy, efitrano fandraisam-bahiny ary suite, dobo ambony tafo, ary drafitra momba ny foto-pisakafoanana tarihin'ny chef roa manana kintana Michelin.
Ny hotely dia manolotra tolotra voafetra amin'ny fotoana fialan-tsasatra.
Ny Blossom Hotel Houston dia nahazo ny COVID Hero Award ho fankasitrahana ny fanohanany ny vondrom-piarahamonina teo an-toerana nandritra ny areti-mifindra sy ny tafio-drivotra ririnina.
"Taorian'ny fotoan-tsarotra ho an'ny tanànanay sy ny fanjakanay nandritra ny 18 volana lasa izay, izahay dia Blossom Hotel Houston faly ny manolotra ny toerana voalohany ho an'ny besinimaro," hoy i Albert Ramirez, tale jeneralin'ny Blossom Hotel Houston. "Faly izahay manome asa ho an'ny vondrom-piarahamonina ary mandray anjara amin'ny famelomana indray ny toe-karena eo an-toerana mandritra ny fanolorana ny vahiny amin'ny fijanonana mihaja sy mahazo aina miaraka amin'ny serivisy sy kojakoja tsara."
Ny Blossom Hotel Houston vao haingana dia nahazo ny COVID Hero Award avy amin'ny Antenimieran'ny varotra Aziatika Houston ho fankasitrahana ny fanohanany ny vondrom-piarahamonina teo an-toerana nandritra ny areti-mifindra sy ny tafio-drivotra ririnina tamin'ny fiandohan'ny taona. Faly ihany koa ny hotely antsoina hoe Hotel Ofisialy ho an'ny ekipan'ny Tenisy ambony latabatra any Etazonia. Eo ambanin'ny fifanarahana, ny fanamian'ny ekipan'ny Tenisy ambony latabatra Amerikana dia hampiseho ny famantarana ny Blossom Hotel Houston.
Ny Blossom Hotel Houston dia faly ihany koa manambara fiaraha-miasa amin'ny Houston Astronomical Society hampiantrano andian-dahatsoratry ny kintana miaraka amin'ny andiany voalohany hatao ny alakamisy 11 Novambra amin'ny 6:30 hatramin'ny 8:30 hariva Ny hetsika "Lunar Evening", izay misokatra ho an'ny vahiny sy ho an'ny besinimaro, dia hatao eo amin'ny tampon'ny dobo filomanosana amin'ny trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana ny tanàna sy ny fidirana tsy misy sakana mankany amin'ny lanitra amin'ny alina. Ny hetsika fararano dia manomboka andiany vaovao amin'ny asa miaraka amin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra izay hahazoana tombony amin'ny fiaraha-monina Houston Astronomical Society sy ny ezaka fanabeazana.
Avy amin'ny toerana afovoany eo akaikin'ny kianjan'ny NRG, ny distrikan'ny tranombakoka malaza, ny fiantsenana, ny fisakafoana ary ny fialamboly, ny hotely vaovao dia mandray ireo vahiny hahita ireo mari-pamantarana mampientam-po manodidina azy ary mahatsiaro ho nohavaozina sy mamelombelona eny an-toerana miaraka amin'ny kojakoja lafo vidy, fampiantranoana kilasy manerantany ary tsara. fisakafoana. Ho fanampin'izany, amin'ny maha hotely boutique tokana mifanakaiky amin'ny tobim-pitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny hotely dia manolotra traikefa amin'ny fandraisana vahiny avo lenta rehefa manatrika fotoana sy fomba fiasa lehibe.
Ny hotely misy rihana 16, izay hanatontosa ny lehibeny nisokatra tamin'ny fiandohan'ny taona 2022, dia manolotra efitrano fandraisam-bahiny sy suite kanto 267 ary efitrano fivoriana sy hetsika mirefy 9,000 metatra mahery. Foibe ara-panatanjahantena manara-penitra eny an-toerana nokarakarain'ny Peloton® dia azon'ny vahiny idirana 24 ora isan'andro, ary koa serivisy concierge amin'ny fiteny maro izay mahafeno ny fangatahan'ny vahiny rehetra miaraka amin'ny haavon'ny serivisy manokana andrasana avy amin'ny hotely boutique tsara indrindra. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia manana dobo filomanosana sy efitrano fandraisam-bahiny manaitra ny afovoan-tanànan'i Houston.
Ny endrika be pitsiny ao amin'ilay trano dia misy fomba voadio sy minimalista miaraka amin'ny paleta miloko miloko marevaka manasongadina jiro manaitra, marbra Carrera be dia be, valindrihana tsy manam-paharoa, gorodona hazo amoron-dranomasina ary haingon-trano mirentirenty manerana ny trano. Ny efitra fandraisam-bahiny sy ny suites dia manana efitra fandraisam-bahiny malalaka miaraka amin'ny hazavana voajanahary be dia be ary misy Wi-Fi maimaim-poana, TV Smart Samsung ambony indrindra, fanamainana volo Dyson, mpanao kafe Nespresso, Gazety nomerika misy PressReader®, ary efitra fandroana marbra misy. ranonorana sy kojakoja Aqua Di Parma ™ manokana mba hanomezana sy hihoatra ny filan'ny orinasa, fialam-boly ary mpandeha mifantoka amin'ny fitsaboana.
Mirefy 9,000 metatra toradroa ny toerana fivoriana sy hetsika, ny Blossom Hotel Houston dia manana toerana misy hetsika marobe natokana ho an'ny fihaonambe ara-barotra amin'ny taranja sy indostria isan-karazany ary koa ny hetsika ara-tsosialy. Ny efitranon'ny Luna Ballroom mahavariana misy varavarankely mirefy hatramin'ny valindrihana dia manana fahaiza-manao audiovisual manara-penitra mba handraisana mora foana ireo fivoriana sy fihaonambe virtoaly ary afaka mampiala voly olona hatramin'ny 250. Ny trano fandraisam-bahiny dia manolotra efitrano hetsika sivy fanampiny miaraka amin'ny hazavana voajanahary be dia be sy ny planina vita amin'ny gorodona. Ho an'ny fampakaram-bady sonia novolavolaina tamin'ny talenta ara-javakanto, ny Blossom Hotel Houston dia manasongadina karazana fandaharana ho an'ny fotoana manokana ho an'ny mpivady.
Tany am-piandohan'ny taona 2022, ny Blossom Hotel Houston dia mikasa ny hanolotra foto-pisakafoana roa miavaka ho an'ny vahiny sy ny mponina ao an-toerana miaraka amin'ny chef roa malaza manana kintana Michelin. Ny trano fandraisam-bahiny ihany koa dia ahitana efitrano fandraisam-bahiny mandray vahiny izay manolotra sakafo mahandro sy zava-pisotro hokarakarain'ny chefs, ary koa ny fisakafoanana ao an-efi-trano ho an'ny vahiny manolotra saran-dalana iraisam-pirenena sy amerikana. Hambara tsy ho ela ny antsipirihan'ny fandaharana momba ny sakafo sy ny chef ao ambadiky ny trano fisakafoanana.
Blossom Hotel Houston dia hita ao amin'ny 7118 Bertner Avenue any Houston, Texas. Miaraka amin'ny fanokafana malefaka, ny hotely dia manolotra fampiroboroboana fialantsasatra manomboka izao ka hatramin'ny 31 Desambra 2021. Ny vahiny dia afaka mamandrika fety orinasa sy hetsika fisakafoanana manokana manomboka amin'ny USD95 isaky ny olona. Ny famandrihana efitrano dia azo alaina manomboka amin'ny USD289.00 ary misy fiantsonana maimaim-poana.
Raha mila famandrihana sy fampahalalana bebe kokoa momba ny Blossom Hotel Houston, tsidiho azafady BlossomHouston.com.
Blossom Hotel Houston dia manolotra traikefa iraisam-pirenena vaovao miorim-paka lalina ao amin'ny Space City. Ny trano fandraisam-bahiny dia mametraka ny vahiny miala sasatra kely avy amin'ny tobim-pitsaboana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao sy ireo orinasa sy toeram-pialam-boly malaza indrindra ao Houston, ary amin'ny maha hotely raitra akaiky indrindra amin'ny NRG Stadium, dia minitra vitsy monja miala amin'ny toerana malaza Houston. Na mandeha amin'ny filàna ara-pitsaboana, na raharaham-barotra na fialamboly, ny vahiny dia afaka mankafy ny fahasamihafan'i Houston, izay hita taratra ihany koa amin'ny fakan'ny trano fandraisam-bahiny mankany amin'ny fototry ny aerospace ao an-tanàna, raha manararaotra ny fivarotana antsinjarany ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana roa mifantoka amin'ny chef, kojakoja tsy manam-paharoa. sy serivisy, efitrano fandraisam-bahiny mirentirenty ary toerana fanaovana hetsika sy fivoriana maro. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady BlossomHouston.com, na hanaraka anay Facebook ary Instagram.